Sida loo abuuro shabakadda isku xidhka - Geofumadas
Abuuritaanka Isku-xirka Isku-xirka
Febraayo, 2008 Cartografia, cadastre, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Ka hor waxaan aragnay sida loo sameeyo mesh quadrant mesh, hadda aan aragno sida loo sameeyo shabakadda iskudhafka iyadoo la adeegsanayo arjiga CAD ... haa, ta ay ArcView iyo Manifold aad u fududeeyaan. Sidoo kale AutoCAD waad awoodaa si aad u isticmaasho macaamiisha.
Xaaladdan oo kale waxaan arki doonaa sida loo sameeyo Microstation Geographics, kuwaas oo dad badan oo isticmaala ma oga waxa uu nidaamku sameeyo; digniin, tani ma aha mid caadi ah Microstation.
1. Waa inuu leeyahay nidaam odoros oo loo qoondeeyay.
Si aad u aragto sida loo qoondeeyey ama loo bedelay, waxaad arki kartaa boostada hore.
2. Qeexida Qalabka
Xaaladdayda waxaan haystaa khariidadan, waxaan horayba u abuurnay kaluunka, sida waxaan u falanqeynaynaa ee boostada loo qoondeeyey.
3. Qalabka muhiimka ah ee qaabeynta
Si aad udhaqaajiso guddiga si aad uhesho mesh, waxaan doorannaa qalab / iskuduwaha nidaamka / yutiilitida. ka dibna waxaannu dhaqaajinnaa astaamaha ugu horreeya (jiillada jiillada jireed).
Halkan waxaa lagu qeexay qaababka la doonayo, aynu aragno badhanka muhiimka ah, kuwani waa la bedeli karaa marxalad kasta oo geedi socodka ah:
Qaabka. Tan waxaa lagu sameeyaa astaamaha kore «Khad Hufan» Khadad hagaagsan ayaa u adeegta qaabeynta
Ref = Laab / dheer. Tani waa sababta oo ah nidaamka isuduwidda tixraaca waan u karti yeelay
Ref = Master. Kuwani waa iskuduwaha aasaasiga ah, sidoo kale waa loo qaabeeyey sidii aan ku sharaxnay boostadaas.
Abuuri. Badhankani waa inuu soo saaro shabakadda, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho illaa intaad habaynayso astaamaha.
Qeybta lagu magacaabo "Components" waxaad awoodsiin kartaa ama diidi kartaa calaamadaha aad rabto inaad kudhigto ama aad u demiso
Xulashada "Deltas" waa in la qeexo haddii xadhiggu ku salaysnaan doono masaafo la qeexay (tusaale ahaan a UTM mesh ee 1000 x 1000.) ama hal mesh oo kasta oo 30 ah.
Xulashada Diyaarinta waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo in meshu uu ka tagayo dhejinta shabaqa ama dhinaca bidix ee geeska bidixda (asal ahaan)
In muuqaal ah waxaa suurtagal ah in la qeexo haddii qaybaha la abuuray ay raaci doonaan calaamad muujinaysa heerka ama sifooyinka (muuqaalada) mashruuca Geographics.
4. Qalabka kale waa hab-dhaqan ... maaha tijaabo iyo qalad laakiin waxay ku habboon tahay waxa la soo saari doono aakhirka. Tan dhexdeeda ArcView y kala cayncayn ah waxay garaaceen qalab kasta oo CAD ah, laakiin ma jirto habka Microstation Geographics V8 sameeyo.
Khadka Cutubka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo qaabka uu jarayo
Shabakadda Shabakadda. Si aad uhesho mesh
Calaamadaha. Si loo qeexo qoraallada, haddii aad rabto iskuduwaha geesaha (NL Corner), cidhifyada shabakadda (Grid Line), Isgoysyada isgoysyada shabakadda (Calaamadda Sax), cabirka qoraalka, qaababka, jajab tobanle , qaabka digriiga ... blah, blah, blah
Khadka caleen. Si aad u muujiso qaabka qeexaya mesh iyo in ay ka kooban tahay aagga si loo dhan yahay: waxaa lagugula talinayaa inaad doorato xadka 4 sababtoo ah ma aha leydi sax ah.
Shabaqa. Kuwani waxaa loo qaabeeyey qaab-dhismeedka soo socda; Khadadka shabakadda si loo qeexo astaamaha shabakadda, Iskudhufyada iskutallaabta ee isgoysyada, Calaamadaha Calaamadaha ee xariiqyada cirifka.
Markaad leedahay wax kasta oo lagu qeexay, «Generate» ayaa lagu dabaqayaa, dhammaan walxaha waa vektor waxaana lagu kaydiyaa heerarka (lakabyada), haddii dib loo abuuro waa la bedelayaa.
Ugu dambeyntii khariidadu waa sidaas, inkastoo aan qirto, waxaa jira noocyo kale oo ah Khariidada leh khariidad. Xuduuda dibedda looma samayn nidaamkan, waxaa loo abuuri karaa unug ahaan ama qaab ahaan (moodello)
ArcView GIS kala cayncayn ah
Post Previous" Hore Muhiimadda macaamiisha
Post Next Shabakada Excel si aad ugu badasho Iskuduwaha Geographic si UTMNext »
12 Jawaab ah "Sida loo abuuro shabakadda isku-xidhka"
SPARTACO isagu wuxuu leeyahay:
BANNAANKA KU HADAL Waxaa jira qodobo aad u tiro badan oo aan fahmin oo aan doonayo LISP, BARNAAMIJKA HORTA AYA LOOGU SOO DHAWEEYAA IN AAD DHAQAN KU DHAQATO FADLAN AAD II SAMEYSID… MAHADSANID
Gloria isagu wuxuu leeyahay:
WAAN KU DANEYN LAHAA IN AAN KA OGAADO MAAMULKA CIVILCAD ... SALAAMAHA !!!
Luisa isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsan, miyaad sharaxi kartaa sida loo sameeyo? Waxaan isku dayay in aan ku dhejiyo cambaareyn laakiin ma helin, qof ayaa ii sharaxi kara? Waan ku faraxsanahay, waxaan runtii ugu baahanahay shaqadeyda.
Mahadsanid iyo salaan
qabow isagu wuxuu leeyahay:
lisp waxay u shaqaysaa autocad 2010 .... sida
Claudio isagu wuxuu leeyahay:
In AutoCAD shabakada waxaa la sameeyaa habka caadiga ah, waxaan u isticmaalaa sanado ka hor 10
(defun strpto (aa / broad)
(Qalab dheer (strlen aa))
(cond (= x minX))
(Layli (l) ku dheji l (liiska x)))
(liiska astaanta (liiska cdr))
(liiska (min (car l) (cadr l)) (max (car l) (cadr l)))
; Xakamaynta la siiyay cordenada X
(Iskuduwaha CalculaY (abcx)
(haddii (= 0.0 b)); ma jiro isgoysyo
(Defun IntersecY (liiska liiska)
liiska (Liiska (CalculaY a1 b1 c1 startX) (CalculaY a2 b2 c2 startX)
(Xisaabinta a3 b3 c3 bilowga ah) (Xisaabin a4 b4 c4 startX)
(halka (/ = liiska lanbarka)
(cutq iyo liiska)
(haddii (iyo (/ = y nil) (= y mY))
(Qeybta l (ku dheji l (liis y)))
; Barnaamijka guud
(Cunto c: cuadri (/ p1 p2 p3 p4 paux incx incy lhn maldato base
ALA BIXIYE XAALADDA DADKA DHAQAALKA IYO MAXIILKA)
(amar «LAYER» «M» «fajacsan» «C» «8» «» »»)
(setq p1 (helitaan «\_ nTaar goosad aag ah«)
p2 (bartilmaameedka p1 «\_ n Xarig kale dhex gal«)
(amar «LINE» p1 p2 «»)
(haddii (> (cadr p1) (cadr p2)); had iyo jeer p1 hoos
(setq p3 (getpoint p1 «\_ nBeel dheeri ah oo balaadh u ah gobolka«)
l (masaafada p1 p3); xisaabinta p3 iyo p4 dhibco, isbarbar dhig
alfa (xagal p1 p2); si p1 iyo p2 fog fog l
alpha (+ (/ pi 2) alpha)
(haddii (> (gaariga p3) (gaariga p1))
(setq alpha (+ pi alpha))
(haddii (= (baabuur p1) (baabuur p3))
(haddii ((- ugu badnaantii bilaabi) (* 2 sare))
(amarka «TEXT» (liiska (+ x1 dl) (+ bilowY dh)) isku darka xNUMX sare))
(amarka «TEXT» «R» (liiska (- x2 dl) (+ bilowY dh)) isku darka xNUMX d))
(isweydiin bilaabi (+ bilawga)
(halka ((- bilawga minX) (* 2 sare))
(amar «TEXT» (liiska (- bilowX dh) (+ y1 dl)) Xaraash sare oo ah '100 dord'))
(amar «TEXT» «R» (liiska (- bilowX dh) (- y2 dl)) XCXX sarreeyaX) sare))
(setq bilowgaX (+ bilowX incx))
(haddii (> (masaafada p1 p3) (fogaanta p1 p2))
(haddii (ama = alpha pi) (/ = alpha 0.0))
(Setq alfarad (* -1 alpha)
alpha (* -1 (/ (* 180 alpha) pi))
p4 (liiska (- (* (baabuur p4) (sababtoo ah alfarad)) (* (cadr p4) (alfarad lahayn)))
(+ (* baabuur p4) (aan lahayn alfarad)) * * (cadr p4) (cos alfarad)))
p1 (liiska (- (* baabuur p1) (cos alfarad)) * * (cadr p1) (aan lahayn alfarad)))
(+ (* baabuur p1) (aan lahayn alfarad)) * * (cadr p1) (cos alfarad)))
salka (liiska 0.0 0.0); asal ahaan
Pablo isagu wuxuu leeyahay:
Hey, qaabka aad ka sameysid moodal ka dibna ka dhajisid meel waraaq ah?
Waxaan kuu sheegayaa sababtoo ah waxaan isticmaalayaa aaladda "diyaarinta daabacaada" aaladda waxaanan jeclaan lahaa inaan ku dhejiyo khadka tooska ah qaab-dhismeedka aan habboonayn shaashadda aad geliso, oo ay tahay inaan bixiyo batoonka dhalinta.
Dhibaatooyinka soo ifbaxa, sideen uga dhigi karaa isku-duwayaasha "bannaan warqad" inay noqdaan kuwa moodeelka ah?
Javi isagu wuxuu leeyahay:
Jejejej ayaa mahad leh
Isagu waa dhibaato.
Sababtoo ah waxaan u malaynayaa in Microstation Geographics ay u dhigantahay MapCAPC Map waxaan u maleynayaa inaad awoodo.
Waxaan doonayaa in aan soo dejiyo qaybta tijaabada ah oo aan u sheego haddii aad awooddo ama aanad awoodin.
Xaqiiqdu waxay tahay inaan sidoo kale xiiso galiyay, waxyaabahan oo kale ayaa lagu samayn karaa Khariidadda?
Autocad Civil 3D 2008 waxaa ku jira Autocad Map, miyaad sharaxi kartaa sida loo sameeyo?
Iyada oo la adeegsanayo AutoCAD Civil 3D no, sababtoo ah tan waxaa loo daryeelayaa in barnaamijku maareynayo nidaamka saadaalinta. Laakiin wax la mid ah ayaa lagu samayn karaa Khariiddada AutoCAD 3D.
Waxaa lagu sameyn karaa 3D Maqaalka AutoCAD 2009, Waxaan u maleynayaa inay xitaa u ogolaato inay isku xirto Google Earth, sidaas darteed waxaa loo maleynayaa in ay taageerto saadaalinta.
Miyuu suurtogal ka dhigan karaa mawduuc bulshadeedka?